Daryeelka Apple + ee loogu talagalay AirPods Max cusub € 59 | Waxaan ka socdaa mac
Shalay Apple ku dhowaad lama filaan bulshada dhexdeeda loogu soo bandhigay AirPods Max cusub. Waxba kama jiraan Studio. Sidoo kale lama arkin Apple gurus isagoo ku dhawaaqaya taariikhda la siidaayo ama magaca sameecadahaas oo qiimahoodu dhan yahay 629 euro, haa, waxaan ku duubi karnaa bilaash). Waa qiimo aad u sarreeya marka la barbar dhigo tartankiisa, in kasta oo ay run tahay in tikniyoolajiyadda ay wataan ay tahay mid cajaa’ib leh, uguyaraan warqad. Dhammaan qalabka elektiroonigga ah ee ay sidato iyo qiimaha ay leeyihiin, malaha fikrad xun qandaraaska Apple Care + 59 euro.
Sameecadaha dhagaha la gashado waa baas aad u qurux badan, waa inaad garataa iyaga oo sawirada Apple ay ku wareejisay ay yihiin kuwo cajiib ah. Waa inaad ku aragtaa xaqiiqda laakiin uma maleynayo inay wax badan kaga duwan yihiin sawirrada. Waa inaan sugnaa waxoogaa, in kabadan ama kayar usbuucii, taas oo ah intee in le'eg ayay Apple qaadanaysaa inay u dirto guryahooda. Waqtigaas ka dib haddii aad go'aansatay inaad iibsato Fikrad xun ma noqoneyso in gaariga lagu daro Apple Care +.
Ma garanayno sida ay u yeelan doonaan ama u lahaan doonaan nooc kasta oo fashilaad ah inkasta oo shan iyo tobanka maalmood ee ugu horreeya aysan jirin wax dhibaato ah, waxaa fiican in lagu bogsado caafimaadka. Ma ahan lacag yar oo aan ka hadlayno hadana waxaan leenahay dhinacyo badan oo ku lug leh shilalka ayaa dhaca marka aadan filaynin. Sidoo kale ilaa aan ka aragno sida ay gudaha ugu jiraan, iyo asxaabteenuba iFixit na tus, waxaa fiican inaad caymis ku hesho caymis dheeri ah Apple. Ma ahan lacag badan haddii aan tixgelinno in 629 euro ay horeyba u ahayd mid la yaab leh.
Waa run in Apple Care + inta hartay ee AirPods ay aad uga jaban tahay, laakiin dabcan ma haysano tikniyoolajiyad aan ku haysanno AirPods Max oo cabirkeeduna uusan isku mid ahayn. Caymiska loogu talagalay Pro iyo AirPods caadi ah ayaa macno samaynaya. Laakiin sidoo kale Max, ee loogu talagalay mawduuca madaxa xijaaban gaar ahaan. Aan aragno hadday cabsi ina siinayso.
AppleCare + waa caymis taas waxay bixisaa illaa laba sano oo ah taageero farsamo khabiir ah iyo daboolida qalabka AirPods Max. Ugu yaraan laba dhacdo oo shil dhaawac ah ayaa lagu daraa 12-kii biloodba, mid walbana waxaa lagu soo dallacayaa service 29 oo adeeg ah. Dabooliddu waxay ka bilaabmaysaa taariikhda kireysigaaga AppleCare +. Daboolida kuma jiraan xatooyada ama maqalka dhagaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » Apple Care + ee loogu talagalay AirPods Max cusub for 59 oo keliya
Apple waxay rabtaa Siri in mustaqbalka loo fiirsado